Ịgbara | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ihe ndị dị irè iji iji mmiri na-agbapu mmiri na dacha
Enwere ọtụtụ ihe mere ndị na-elekọta ubi ji adịghị njikere ma ọ bụ na ha enweghị ike ịzụta usoro ịme mmiri na-edozi maka ogige ihe ubi na greenhouses. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, a na-eji aka mmiri na-ekpuchi mmiri site n'aka onye ọ bụla na-ebi ndụ n'oge okpomọkụ. E kwuwerị, na saịtị gị ị nwere ike ịchọta ihe zuru oke na akụkụ maka nke a.
Mkpọpu maka ịsa si na gbọmgbọm: otu esi ahọrọ na otu esi edozi ịgbara
Mgbapụta maka mgbọm maka irighiri mmiri bụ ngwaọrụ hydraulic kachasị mkpa na mba dacha, ebe mmiri na-adịghị na mmiri mmiri dị n'ime mmiri. Ọ bụrụ na akpa akwa nke akwa na akwa ifuru dị gị mkpa, n'okpuru ị ga-amụta ihe niile gbasara otu esi họrọ nfuli maka ịkụzi ogige ahụ site na gbọmgbọm.
Ihe nzuzo nke na-eme ka mmiri na-ekpuchi irighiri karama plastik na aka aka ha
Ọgba mmiri nke na-agbapu mmiri na-enye ohere ka a ghara ịkụ osisi n'ubi n'okpuru mgbọrọgwụ n'onwe ya. Na-etinye obere oge, ị nwere ike ikpokọta usoro dị otú a n'ụlọ, na-enweghị mkpa ịzụta ihe dị oke ọnụ. Mgbe ị na-akpachapụ anya, ịmịpụ mmiri si na karama plastic, nke aka aka gị, ga-eje ozi ruo ọtụtụ afọ.
Ịhọrọ sprinklers maka ịkọ ubi
Ebe ọ bụla ebe mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na osisi ndị ọzọ na-eto eto. N'isiokwu anyị, anyị ga-akọwa otú ị ga-esi họrọ sprinkler maka ịgbara n'ime ubi ahụ, anyị ga-akọwa ụdị isi ngwaọrụ ndị a. Nkọwa zuru ezu na nzube nke ngwaọrụ Na-adabere na mmiri nke saịtị na osisi ga-arụ, ọ dị mkpa ịhọrọ nri ziri ezi.
Ịgba ogige ahụ na usoro ịgbara mmiri "Drop"
Iji nweta nnukwu owuwe ihe ubi, ebe ị na-adịghị arụ ọrụ na saịtị ahụ 24 awa n'ụbọchị, na-edozi osisi ndị ahụ, a na-emepụta usoro ịme ihe pụrụ iche maka ubi ahụ. Ndị na-ewu ewu n'etiti ha bụ imebi nsị. N'isiokwu anyị, jiri ihe atụ nke "Ntugharị", anyị ga-akọwa ihe ụlọ a bụ na ihe kpatara ya ji dị mkpa.
Uru ndị dị na iji oge maka ịgbara n'ime ubi
Ọtụtụ ndị nwe ha na-etinye oge buru ibu n'ịsachasị osisi ndị ahụ, ebe ha na-etinye ọtụtụ mmiri karịa osisi dị mkpa. Nsogbu kachasị dị na ya ịmepụta na-apụ na-apụ kwa ụbọchị site na mkpofu ụlọ na ubi. Maka ebumnuche ndị a, e kere oge ntanetị pụrụ iche, nke anyị ga-atụle n'isiokwu a.